nei uchisarudza induction hita - induction kudziya muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
nei uchisarudza induction heater
Induction Brazing iyo inoshandiswa-inoshandisa nzira inoshandisa kuzadza nsimbi (uye kazhinji anti-oxidizing solvent inonzi flux) kubatanidza zvidimbu zviviri zvesimbi yakagadzikana pamwe chete pasina kusungira zvinhu zvese. Pane kudaro, inokonzera kupisa kunoputika muzadziro, iyo inobva yasvirwa muzvigadziro zvayo ne capillary action.
Induction brazing inogona kubatanidza nhumbi dzakawanda dzesimbi, kunyange dzakaoma kune dzisiri-feri. Kunyora kusungira kunonyatsojeka uye kunokurumidza. Zvishoma chete zvinotsanangurwa nzvimbo zvinopisa, zvichisiya nzvimbo dziri pedyo uye zvinhu zvisingabatsiri. Nhengo dzakasimba dzakashongedzwa dzakasimba, dzakaputika-uchapupu uye kupisa kusagadzikana. Ivewo akanaka kwazvo, kazhinji haafaniri kutora milling, kugaya kana kupedza. Kunyanya kusungirirwa kwakakosha kwekubatanidzwa mumiganhu yekugadzira.
DaWei Induction kushungurudza maitiro inogona kushandiswa kune chero basa ripi neripi. Kusvika iye zvino, masangano edu anowanzoshandiswa mumakambani e electrotechnical kuti asungirire jenereta uye zvigadzirisheni zvigadzirwa semapuranga, micheka, zvindori, waya uye SC-rings. Vanosungirawo mapaipi emotokari uye AC uye zvikamu zvezvakagadzika zvemakambani emotokari. Inzvimbo yeaeronautics inoshandisa induction kuti isungirire mazhenje emafuta, mashizha emakwenzi, uye mafuta uye hydraulic systems. Muchigadzirwa cheimbayi masangano edu anobisa compressor zvinhu, kupisa zvinhu uye mapfuti. Ndeipi midziyo iripo? Our Induction kusungira mhinduro kazhinji inosanganisira DaWei Handheld Induction heat system.
Categories FAQ Tags induction heat applications, Zvakanakira kuburitsa bhiza, chii chinonzi induction brazing, nei uchisarudza induction brasing system, nei uchisarudza induction heater